Ikhadi le-Smart, i-Nfc Card, i-Rfid Tag, i-Plastic Card, i-Rfid Card - Ingqondo
Iminyaka Iwaranti Yekhwalithi
Iminyaka Umkhiqizo Onokwethenjelwa
Ukukhonza amakhasimende ku-
emazweni angaphezu kwekhulu
Amakhasimende e-VIP aphesheya kwezilwandle
Lapho kukhona i-IOT, kukhona uMqondo
thinta ikhadi le-ic
ikhadi lokhiye wehhotela
Ikhadi lomgwaqo womphakathi
Ithegi ye-RFID epoxy
Ikhadi lobulungu be-RFID
Isitika se-UHF rfid
I-Top 3 e-China
I-MIND ibihola umkhakha wamakhadi we-RFID smart
IMIKHIQIZO EBALULEKILE: Amakhadi we-Rfid, amakhadi okhiye we-Rfid, amathegi we-Rfid, i-Rfid Label, izitika ze-RFID, amakhadi we-IC chip, amakhadi omugqa kazibuthe, amakhadi we-PVC ID kanye nomfundi / ababhali abahlobene: kufaka phakathi imodyuli yokuskena, umshini wababekhona, imikhiqizo ye-DTU / RTU.
Ama-copyright angama-30 + wesoftware, ihhovisi legatsha le-7, i-ISO9001 / 14001/18001, i-TUV, i-SGS, i-ROHS efanelekile.
Kubanjiswene ezimbonini ezahlukahlukene, kufaka phakathi ikhadi le-ID / ezokuThutha / ezokuPhepha koMphakathi / Amandla / Isikole / Isibhedlela / Umshuwalense / Ihhotela / Izinsiza / Ukuthengisa.
Izinsuku 7-15 on-time kwezidingo, iminyaka engu-2 yesiqinisekiso isikhathi.
UKUZIJIKELELA: Siyakwamukela nge-OEM, wamukelekile ukuhlolwa kwamabhuku.
Amalungelo obunikazi e-RFID
Isikwele factory factory
Sigxile kuzo zonke izinhlobo zama-keycards wehhotela kufaka phakathi: ama-rfid keycards hot, amakhadi we-magnetic stripe keycards kanye nama-keycards wehhotela ahlanganisiwe ahlukahlukene: VING / Salto / Betech / Adel / Onity / HID brand njll.
Ikhadi le-PVC livame kakhulu empilweni yethu yansuku zonke, njengekhadi lokuthenga, ikhadi le-metro, ikhadi legesi, ikhadi le-cinema, ikhadi lesikweletu, i-ID kazwelonke kanye nekhadi lasebhange esivame ukulisebenzisa, impahla yalo yi-PVC.
I-MIND ingabakhiqizi abakhulu be-3 be-Rfid Cards e-China. Sikhipha wonke amakhadi we-RFID wemvamisa ku-125 KHz / LF, 13.56 MHz / HF, 860-960 MHz / UHF kanye ne-Dual Frequency (13.56 MHz / 125 KHz) noma iDual Frequency (UHF 860-960 MHz / 13.56 MHz).
Izitifiketi Zelebula zeRFID zisetshenziswa kabanzi kuhlu lwezimpahla nezicathulo, ukuphathwa kwemishini yeMboni, umtapo wezincwadi, ukuphepha kwempahla nezinye izimboni
I-RFID iphelelisa ukudla ...
29 Julayi, 21
Eqinisweni, ezimpilweni zethu zansuku zonke, izindaba ezimayelana nokuphepha kokudla zihlala ezindlebeni zethu. Emicimbini evezwe Emcimbini Wabathengi ngoMashi 15 ...
NgoJulayi 27, 2021, umhlangano we-2021 Chengdu Internet wezinto zebhizinisi lomsebenzi okhethekile womkhakha wezimali wenza umhlangano ngempumelelo ...
Isiphikisi esiphakeme kakhulu ...
Julayi 21, 21
Ubuchwepheshe bokulwa nomgunyathi emphakathini wanamuhla sebufinyelele ebangeni elisha. Kunzima ngokwengeziwe ngabenzi bomgunyathi ukwenza okukhohlisayo ...